DF Ayaa Digniin U Dirtay Golaha Amaanka Oo Ku Saabsan Doorashooyinka » Axadle Wararka Maanta
DF ayaa digniin u dirtay golaha amaanka oo ku saabsan doorashooyinka
Muqdisho (Axadle) – Wasaaradda arrimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa uga digtay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay faragelinta doorashooyinka Soomaaliya.
Bayaanka oo uu ku saxiixnaa Xoghayaha Arimaha Dibada Maxamed C / risaaq ayaa jawaab u ahaa hadal 31-kii Maarso uu soo saaray Madaxweynaha Golaha Amniga iyo Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobay Linda Thomas-Greenfield, kaasoo aqriyay bayaanka Golaha Amniga.
Qoraal ay aqrisay Linda Thomas-Greenfield, Golaha Amniga ayaa walaac ka muujiyay qalalaasaha doorashada ee Soomaaliya waxayna ugu baaqeen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay yeeshaan wadahadalo deg deg ah shuruud la’aan.
Iyadoo la tixraacayo hadaladii ka soo yeeray Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Golaha Amniga 31-kii Maarso, Linda Thomas-Greenfield, Dowladda Federaalka, waxay muujineysaa mahadnaq iyo qadarin fikradaha, taageerada ballaaran ee xubnaha Golaha Amniga ee horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya. , midnimada dhulka, midnimada iyo madaxbanaanida siyaasadeed. ”Ayaa lagu yiri qoraalka.
Dawladdu waxay intaas ku dartay inay ku wargelisay Golaha Amniga in hannaanka doorashada ay tahay mid khuseysa Soomaaliya, oo aysan cid kale u khusayn
“Doorashooyinka qaran ee Soomaaliya, sida dhammaan waddamada madaxbanaan, waa arrin qaran, oo ay maamulaan oo ay go’aamiyaan hay’adaha qaran, iyadoo la raacayo sharciga No 30 ee baarlamaanku meel mariyey,” ayaa lagu yiri qoraalka.
“Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa dhammaan faragelinta ay ku hayaan hay’adaha dibedda ee geedi socodka doorashooyinka qaranka inay tahay faragelin toos ah oo lagu hayo arrimaheenna gudaha, taasoo ka hor imaaneysa go’aannada Golaha Amniga, xeerarka iyo sharciyada caalamiga ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in amniga doorashooyinka dalka ay u xil saaran yihiin guddiga amniga doorashooyinka qaranka oo uu guddoominayo ra’iisul wasaaraha.
Hoos ka aqriso warqada